REPUBLICADAINIK | के हो म्यानमारका रोहिंग्या मुस्लिमको समस्या ? - REPUBLICADAINIK
के हो म्यानमारका रोहिंग्या मुस्लिमको समस्या ?
लण्डन, २८ भदौ । रोहिंग्या एउटा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, जो बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा शताब्दीऔँदेखि बसोवास गर्दै आएका छन् । यो समुदायलाई विश्वकै सबैभन्दा पीडित अल्पसंख्यकका रूपमा चित्रण गरिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुक म्यानमारमा अझै पनि ११ लाख रोहिंग्या मुस्लिम छन् ।
रोहिंग्या समुदाय विश्वकै सबैभन्दा दमन गरिएको र अपहेलित अल्पसंख्यक समुदाय भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बताउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघ, विभिन्न मानवअधिकारवादी समूहहरू– एम्नेस्टी इन्टरनेसन, ह्युमन राइट वाचले रोहिंग्या समुदायमाथि म्यानमार सरकार र अन्य छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यवहारको कटु आलोचना गरेका छन् । म्यानमार सेनाले राखिनेमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसंघको ठहर छ । रोहिंग्यामाथि भएको दुव्र्यवहारबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघले गत मार्चमा एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मिसन स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, म्यानमार सरकारले राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्तालाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि झनै अन्योलता बढेको छ । रोहिंग्या समस्याबारे राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले गम्भीर चासो देखाएका छन् । म्यानमारमा जातीय सफाइको खतरा बढेको बताउँदै हिंसा रोक्न महासचिव गुटेरेजले बारम्बार सुकीलाई आह्वान गरेका छन् ।
Published : Wednesday, 2017 September 13, 7:10 am